शाही-इन्भेस्टमेंट्स। शाही-इन्भेस्टमेंट्स समीक्षा
इन्टरनेट, इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य
मान्छे सधैं छिटो र सजिलो मुद्रा को लागि एक तरस छन्। दबाउनु असम्भव छ जो एक प्राकृतिक अन्त, केही दयालु - यो जस्तो देखिन्छ। यो पैसा छिटो बनाउन thrust छ र को ठगी र योजनाहरु धेरै पछि सबै आफ्नो आयोजकहरु मात्र कमाएका जो, धेरै, निर्माण गरिएका छन्।
इन्टरनेट युग तपाईं कुनै पैसा को कुनै पनि रकम हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ जो छिटो र सजिलै छिटो र अज्ञात भुक्तानीको एक नयाँ क्षेत्र, खोलेको छ। पैसा हस्तान्तरण गर्न र तिनीहरूलाई प्राप्त वृद्धि गर्न लगानी कल HYIP-परियोजनाहरूको हजारौं निर्माण थिए यो क्षमता को आधार मा।
HYIP उच्च उपज र जोखिमपूर्ण परियोजना (अंग्रेजी) को लागि खडा छ र प्राप्त र सहभागीहरू पैसा issuing, एक स्वचालित सेवा हो। सबै यो परियोजनामा लगानी गरेर हासिल गर्न सकिन्छ बुझ्न दिने, पैसा यटों, गाडी र सुन्दर बालिका छविहरू - यो "सुन्दर जीवन" को तत्व भरिएको साइट, जस्तो देखिन्छ। एक क्लासिक उदाहरण वेबसाइट शाही-इन्भेस्टमेंट्स परियोजना (मलाई) मा देखेका गर्न सकिँदैन - महंगा कार को एक आकर्षक फोटो पनि छ, र पनि तथ्याङ्क योगदान र लाभ (quantifiable, को पाठ्यक्रम, rubles लाखौं)। साधारण इन्टरनेट प्रयोगकर्ता साँच्चै लाग्न सक्छ - र यो के हो? हामीलाई अघि एक प्रकारको छ को लगानी परियोजना जो शाही-लगानी जम्मा खोल्छ भर्चुअल मुद्रा मा। तथापि, सबै को विस्तार हेरौं।
त्यसैले, पहिले हामी जसद्वारा सबै कार्यक्रम जस्तै शाही-इन्भेस्टमेंट्स सञ्चालन योजना विश्लेषण। यस्तो परियोजनाहरू सर्वश्रेष्ठ समीक्षा यसको गतिविधिहरु को गतिशीलता देखाउन। सुरुदेखि, निवेश गरेका छन् जसले भन्न प्रयोगकर्ताहरूले मौका लिनु र प्रयोग को एक कार्यक्रम रूपमा सानो रकम विश्वास गर्न तयार छन्। सायद तिनीहरूले पनि आफ्नो पहिलो भुक्तानी आयोजकहरु द्वारा प्रतिज्ञा (र सायद एक भन्दा बढी पनि) प्राप्त। तर, समय भुक्तानी एक निश्चित अवधि आउँदै रोक्न पछि नै नकारात्मक टिप्पणी धेरै छ। सबैलाई कार्यक्रम को जीवन समाप्त बुझ्नुहुन्छ। यो HYIP को नै, साथै धेरै अरूलाई भएकोले शाही-इन्भेस्टमेंट्स छैन एक अपवाद छ। जो साझेदार भुक्तानी को खर्च मा आउँछ पैसा, लाग्न सक्छ कतै बाहिर छैन - यो सिर्फ निम्न लगानीकर्ताले बनाउन हो। यस्तो कार्यक्रम को संचालन को सिद्धान्त जस्तो एक पिरामिड योजना, मात्र एउटा सानो मात्रा मा, जस्तै "एमसोमसोमबार" को रूपमा।
मान्छे किन HYIP मा पैसा बोक्न गर्छन्?
प्रश्न उठ्छ: "पैसा आफ्नो मान्छे अझै पनि गुमाउनु हुनेछ भने, त्यसैले तिनीहरूले बोक्न किन?" सजिलो शिकार जस्तै मानिस: यहाँ हामी लेखको सुरुमा दिइएको थियो जो बयान, फर्कनुहोस्। हामी केहि पनि गरिरहेको बिना केहि प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने भावना, आफ्नो पैसा बनाउन जबरजस्ती हामीलाई आकर्षित गर्छ। जस्तै Depositors परियोजनाहरू तिनीहरूले पैसा झिक्न पछि परियोजना पतन हुनेछ आशा, बारम्बार पुष्टि यी समीक्षा शाही-Invest। "हो, मानिसहरू पैसा गुमाउनु हुनेछ: यो छ जो गणना, गरेको छ। हो, पिरामिड पतन हुनेछ। तर म चलाख छु, र म यस मा नगद गर्न सक्षम हुनेछ। " र सत्यतामा, त्यहाँ HYIP लगानी गरेर कमाउन व्यवस्थापन नगर्ने लगानीकर्ताले एक श्रेणी छ। जस्तै शाही-इन्भेस्टमेंट्स पनि एक परियोजना (घोटाला, अधिक सटीक हुन) कुनै पनि मामला मा, भुक्तानी पहिलो लहर गर्नुपर्छ, र यो पहिले नै लाभ प्राप्त गर्न व्यवस्थित गर्ने भाग्यशाली व्यक्तिहरूलाई छ। र, वास्तवमा, पहिलो भुक्तानी र ती कार्यक्रम बाँकी यी भुक्तानी गर्न सक्षम छन् कि बीच भेद गर्ने क्षमता को खर्च मा, केही मानिसहरू यस्तो जोखिमपूर्ण लगानी बाट आय प्राप्त।
कार्यक्रम को पतन पछि के हुन्छ?
यस्तो शाही-इन्भेस्टमेंट्स वेबसाइट (बिस्तारै मानिसहरू पैसा गुमाउनुपर्ने रूपमा deteriorate जो प्रतिक्रिया) पतन हुनेछ पछि, केही हुन्छ। परियोजना को आयोजकहरु यसको सुरु-अप मा निवेश धन निरुत्साहित गर्न र यस्तो कार्यक्रम खोल्न जारी संभावना छ। एक आय प्राप्त र पैसा लिन गर्ने मान्छे, यस्तै लाभ को खोज मा सार्न। बहुमत - ती जसको पैसा परियोजना मा रहेका, वा त्रुटिहरू मा HYIP-लगानी वा गरिरहेको काम संग गाँसिएको। र ब्लग, फोरम र लगानीको परियोजनाहरूको सूची को सबै किसिमका त्यहाँ रिपोर्ट कि शाही-इन्भेस्टमेंट्स छन् - घोटाला, र यो टाढा रहन हुनुपर्छ।
मैले एक सुरक्षित लगानीको बनाउन सक्छ?
को पाठ्यक्रम, तपाईं उच्च-उपज कार्यक्रम (र पहिले नै सुरक्षित उच्च विचार गर्न सकिन्छ वर्ष मा लगानी 30 भन्दा बढी प्रतिशत को राजस्व) सँग कुराकानी कहिल्यै गर्न सक्छन् र राजधानी वृद्धि बढी विश्वसनीय र "सही" तरिकामा काम। उदाहरणका लागि, यी बैंक जम्मा, साझेदारी खरिद, भरोसा व्यवस्थापन रूपमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि, तथापि, 50% मुनाफा हामी गणना गर्न सक्दैन (रयल-इन्भेस्टमेंट्स मा प्रतिज्ञा) को दिन सम्म प्राप्त गर्न। समीक्षा नै मान्छे संकेत धेरै केही मानिसहरूलाई चासो कमाउन यस्तो विधि। यो स्पष्ट छ: रूढिवादी निवेश नगद को ठूलो रिजर्व को लाभदायक धारकों हुन सक्छ। निवेश पैसा ठूलो रकम को पृष्ठभूमि विरुद्ध, रूढिवादी स्रोतहरू दिन हुनेछ कि लाभ महत्वपूर्ण भनिन्छ गर्न सकिन्छ। यस मामला मा, मान्छे को बहुमत पैसा धेरै तपाईं सफल कम्पनीहरु को साझा किन्न कुनै अनुमति दिन्छ। तदनुसार, तिनीहरूले यस प्रकारले प्राप्त गर्न सक्ने आय छैन पर्याप्त सकिन्छ। त्यसैले, बाहिर एउटा तरिका - "बैंक तोड्न" गर्न जोखिम लिन।
शाही इन्भेस्टमेंट्स परियोजना
मुद्रा अनलाइन कसरी बनाउने?
"Lukoil" बोनस कार्ड। कार्ड कसरी सक्रिय, "Lukoil"
कसरी बनाउन अनलाइन नीलामी
एक क्लिक के हो? कमाउन यसलाई कसरी सम्भव छ?
Yandex मेट्रिक, आफ्नो वेबसाइट वा ब्लग को स्थिति मा प्रभाव
एक Webmoney पर्स कसरी गर्ने? Webmoney पर्स कसरी Replenish गर्न?
जनवरी मा यूएई मा बिदाहरू
किन पानी संग एक जल स्ट्रोक बुझाने सक्दैन? के खतरनाक छ र के तपाईं आगो को मामला मा पालना गर्न आवश्यक नियम
प्लास्टिक Windows को लागि आपूर्ति हावा वाल्व कसरी चयन गर्न? समीक्षा र सुझाव
खमीर खाना: लाभ र हानि
नरिवल - यो विदेशी को स्वाद
Pianist भिक्टोरिया Postnikov: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
देश मा conifers: चयन र रोपण
हातमा गर्न पाखुरा मा दुखाइ, गराउँछ, उपचार
यस नवजात लागि सुट छनौट: जाडो संस्करण
परीक्षण कार्यक्रम - त्रुटि पत्ता लगाउने प्रक्रिया सफ्टवेयर उत्पादनमा
ओभरफ्लो वाल्व: आवेदन र फाईदाहरू
मानिसहरू मा Pelvic अल्ट्रासाउंड: समावेश के छ?